डायरी : डुबेको साझामा छिपेको आँसु
२०७३ साल असार महिनाको १७ गते शुक्रबार । दिनभर दर्केझरी परिरहेको थियो । असार महिना, वर्षातको मौसम पानी त पर्ने नै भयो । एकछिन पानी रोकिन्छ कि भनेर म घरी आकासतिर, घरी घडीतिर हेरेर बसिरहेँ । पानी बिदो हुने प्रतीक्षामा करिब २ घन्टा बित्यो तर पानी थामिने छाँटकाँट देखिएन । अफिस जान ढिलो भएकोमा थकथकी […]
अनशन कि बिरामीको उपचार ?
हुन त समाजले मानिसलार्इ आफु अनुकुल परिर्वतन गर्दै लैजान्छ । मानिस पनि आफु कस्तो हुनु पर्ने..
बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी बन्द गर !
नेपालीहरू देशमा रोजगारीको अभावले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । हालै मात्र वैदेशि..
र्तमान पुस्ता अहिलेको नेतृत्व संग निकैनै फ्रस्टेटेड छ । जसका कारण उनिहरुलाई विद्यमान राजनि..
सहिदको रगतले सजिएको देश नेपालले प्राचीनकालदेखि नै अफ्नो शिर विश्वको सर्वोच्च शिर सगरमाथाझै..
छलकपट र षड्यन्त्रद्वारा दुनियाँको नजरमा देखिने सफलता प्राप्त होला तर इमान्दारिता र सत्यमा अन्तरमनको आत्मसम्मान र सन्तुष्टि भेटिन्छ । हालका दिनहरु परिवर्तित समय सँगै साम्प्रदायीक षड्यन्त्रका प्रायोजनहरु बाक्लिँदै गैरहेको छ । लाग्छ इमान्दारीता इतिहास बन्दैछ अनि इमान्दारीताको जीत सपना । नेपालको इतिहासमा पटक–पटक इमान्दारीता र स्वाभि..
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को आय–व्ययले कल्पनासम्म गर्न गाह्रो हुने न्यून आर्थिक वृद्घि तथा न्यून कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई प्रतिविम्बित गरेको छ । देशको आम्दानीको स्रोतमध्ये विप्रेषणको ३० प्रतिशतले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान रहेको तथ्याङ्कले देखाउँ छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा विप्रेशण कृषि प्रधान मुलुकका लागि धेरै हो । त्यसैले कृषि प्र..
भारतलाई टाढा धकेल्ने र चीनमार्फत व्यापार गर्ने काठमाडौंको सपनाले केही आकर्षण हासिल गरिरहेको देखिन्छ । मात्र प्रश्न के हो भने, यसका आकांक्षा विद्यमान व्यापार तथा व्यवसाय यथार्थमा छ कि छैन रु मे २४ मा चीनको राज्य–नियन्त्रित ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित एउटा लेखले बेइजिङद्वारा प्रस्तावित नेपालसँग जोडिने रेलबारे दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको..
सरकार ! अझै कति पुस्ताले परदेशको माटोलाई नेपाली रगतले भिजाउनु पर्ने हो ?
घडीको सुईले बिहानको ३ बजाउदै छ। आँखा झिम्मिक्क गर्न मान्दैन ।सायद निद्राले पनि अन्तै बसाई सार्यो क्यार । कोठामा म जस्तै आफ्नो जीवनको कुनै टुंगो नभएका ६ जना साथीहरु गहिरो निद्रामा स्वास फेरिरहेका छ्न। कहिलेकाहीँ त डर लाग्छ, दिनभरको चर्को घाममा पसिना तप्पतप्प चुहाएर राति चिसो AC मा सुतेका यी साथीहरु, कतै blood सर्कुलेसन बन्द [&hel..
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय शृङ्खलाबद्ध रूपमा विकास र समृद्धिका योजनाहरू सुनाइरहँदा ती योजनाको कार्यान्वयन र विश्वसनीयताका पक्ष र विपक्षमा देशभित्र अनेकौँ टिप्पणीहरू आइरहेका छन् । एकथरी तप्काले उनका योजना र लक्ष्यलाई हावादारी भन्दै आलोचना गरिरहेको छ भने अर्को तप्काले देश अब समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै ..
हामी नेपाली जनता आफ्नै देशमा अन्योलमा छौ । अनेकन् अत्याचारको सामना गर्न बाध्य भएका छौं । सामान्य जनताहरुले जीवनयापन चलाउन धौधौ परेको अबस्था छ। सन् १९८४ नोभेम्बर १ देखि अंग्रेजहरुले नेपालीसँग लडाईँको सुरूवात गरेपनि हामीले विजय प्राप्त गरेकै हो । तर, फेरि उनीहरुले लडाईको रणनीति परिबर्तन गरी इन्डिया कम्पनीमार्फत नेपालसँग सुगौली सन्..
दन्डहीनता बढ्ने, न्यायिक पद्धति ध्वस्त हुने र मानवअधिकार उल्लंघन हुने भन्दै केही संघ–संस्था सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न खडा गरिरहेका छन् । शक्तिकेन्द्रको स्वार्थबमोजिम प्रचण्ड, बाबुराम, शेरबहादुर देउवालगायत तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षका नेतालाई जेल हाल्ने कुरा गरेर नेपालमा उद्दन्डता मच्चाउन के..
९ औँ पटक मिती घोषणा गरिए बमोजिम नेपाल विद्यार्थी संघको आसन्न ११ औँ महाधिवेशन अहिले संघारमा छ । आठ पटक सम्म पनि मिती तोकिएर स्थगित भएको नेविसंघको महाधिवेशन अहिले पनि हुने वा नहुने अझै अन्योल छ । यहि अन्योलताका बिचमा आम विद्यार्थी, महाधिवेशन प्रतिनिधी एवं नेता कार्यकर्ताको बिचमा भने महाधिवेशनको ज्वरो ह्वात्तै बढेको छ । […]
गतसाता यो पंक्तिकारलाई एउटा समाचार प्राप्त भयो । समाचार आफ्नै मित्रविरुद्ध थियो । ती मित्र भने हाल माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । क्याम्पस पढ्ने समय २०३६ सालतिरका ती मित्र क्याम्पस पढ्दा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता थिए । पंक्तिकार भने तत्कालीन अखिल छैठौको कार्यकर्ताका रूपमा क्रियाशील थियो । ३७ वर्ष अगाडिको क्याम्पस जीवनको मित्रक..
अमेरिकी समाचार संस्था फोब्र्सले कति सत्यको आधारमा नतिजा सार्वजनिक गर्छ मैले भन्नसक्ने कुनै आधार मसँग छैन । तथापि गरिब देश नेपालको उद्योगपति विनोद चौधरीलाई विश्वका अर्बपतिको सूचीमा फोब्र्स पत्रिकाले दुई पटक सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसपटक विश्वको शक्तिशाली महिलाहरूको सूचीमा ५२औं नम्बरमा नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सूचीक..
तत्कालिन सरकार प्रमुखलाई बुझाएको ४० बुँदे मागको उचित सम्बोधन नभएको भन्दै २०५२ फागुन १ गते नेकपा माओवादीले जनयुद्वको उद्घोष गर्यो । देशमा आमुल परिवर्तन ल्याउनका लागि भनेर सुरु भएको आन्दोलनमा १४ हजार बढी नेपाली आमाका सन्तानहरुले प्राणको आहुती दिए । कयौं बेपत्ता भए, अनि हजारौं अंगभंग भइ अहिले नरकिय जीवन बिताउन विवस छन् । समाजमा [&h..
माओवादी केन्द्रले तत्कालै गर्नुपर्ने कामहरु
दशवर्षे सशस्त्र युद्धमा सहभागी भएका मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको माओवादी र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादीबाहेक अरु सबै माओवादी धारका पार्टी तथा समूहहरू एकीकृत भई नेकपा (माओवादी केन्द्र) गठन भएको छ । यो एकताले सर्वत्र खुशीयाली सञ्चार गरेको थियो । परन्तु केन्द्रको गठनपछि एकीकृत पार्टीको नेतृत्वपंक्ति भागबण्डामै केन्द्र..
पाठकपत्रः स्वयम्भूमा हुने यौनजन्य गतिविधि किन नियन्त्रण गर्दैन सरकार ?
हामी नेपालीहरु धर्ममा हदैसम्म आस्था राख्छौं। हाम्रो रीतिरिवाज नै धर्मबाट प्रभाबित छ। घरमा अनुशासन पनि धर्मकै नाममा सिकाइन्छ। केही खराब काम गरेमा भगवान रिसाउछन्, भगवानले कान काटिदिन्छन् भनेर साना नानिबाबु हरुलार्इ तर्साइन्छ। हिन्दु धर्म र बुद्ध धर्मलाई हामी लगभग एउटै मान्छौ। बुद्धलार्इ हामी भगवान बिष्णुकै अवतार मान्छौ। पशुपतीनाथ ..
कुश्मा नगरपालिका सरसफाईको रजतजयन्ती
सरसफाईको २५ औँ हप्ता अन्तर्गत बिहिबार कुश्मा बजारमा हजारौँको संख्यामा मानवसाङ्लो प्रदर्शन गरिएको छ । ‘सफा सहर, समृद्ध कुश्मा नगर’ नाराका साथ कात्तिक दोश्रो हप्तादेखि सुरु भएको सरसफाई अभियानले बिहिबार रजतजयन्ती मनाउँदा झन्डै तीन हजारको संख्यामा मानिसहरु सडकमा उत्रिएर अभियान सार्थक भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी झं..
बलात्कार भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा याद आइहाल्यो । सानै थिएँ म ताकी ४/५ कक्षामा पढ्थे । एक दिन म खाना खाएर बाहिर निस्कँदा टिभीमा तराईमा एक पुरुषले एक नाबालिकालाई बल्तकार गरे भन्ने समचार मेरो कानमा गुन्जियो । हजुरबुबा औंलाको कापमा चुरोट च्याप्दै ल हेर कुकुर, साला भन्दै समाचार सुनिराख्नुभएको थियो । आखिर यो बलात्कार भन्या […]
म गणतन्त्र कसरि मनाउँ मनिषा ?
तिम्रो आत्मामा शान्ति मिलोस हार्दिक श्रदान्जली मनिषा । परिवारजन प्रति हार्दिक समबेदना प्रकट गर्दछु । समबेदना र श्रद्धाञ्जली दिन सक्ने निरिह हैसियत बाहेक अरु म संग केहि छैन मनिषा । हुन त जनताको सुन्दर नयाँ संबिधानको एकथान विधानमा छौ । राजतन्त्रको अन्त्य संगै गणतन्त्र नेपालको रंगशालामा उभिएका छौ, जहाँ आज गणतन्त्रको नारा गुन..
विनोदलाई एसएलसी परीक्षाको नतिजा आएको दिन कम्ती खुसी लागेको थिएन । खुसीले सीमा नाघेका थिए, जतिबेला उसले आपm्नो लब्धांकपत्र हेरेका थिए । हुन त उसलाई उत्तीर्णमात्रै हुँदा पनि हुने थियो । तर, परीक्षाको समयमा गरेको सानो मिहिनेतले गर्दा विशिष्ट श्रेणी नै हात पार्न सफल भएका थिए । एसएलसीपछि उसको सपनाको बाटो खुलेको थियो । उसलाई [&helli..
आमाको गर्भबाट जन्मने बित्तिकै एउटा बालक खुसीले रुन्छ । संसार देख्न पाएँ भन्ने उत्साहले अनि उमङगले च्याँ–च्याँ गर्छ । के थाहा उसलाई यो धर्तीमा जन्म लिएपछि कति दुःख हुन्छ ? के थाहा उसलाई सपनाको भरमा मान्छेलाई उडाईन्छ, बोलीकी भरमा पागलको उपनाम दिइन्छ । अरुको बोलीको कदरभन्दा पनि आलोचना गर्ने बानी धेरैको हुन्छ । कसैले नयाँ […]
‘म’ शब्दको प्रयोग प्रिय हुँदैन । किनभने यस शब्दको प्रयोग बोलेर गरियोस् वा लेखेर, यसबाट घमन्ड र अभिमान झल्किन्छ, जो यस पंक्तिकारलाई पनि मन पर्दैन । तर गएको साता यसको नाम केही सञ्चारमाध्यमले निकै उछाले र ‘म’ भन्न बाध्य पारे । नेपाल–अमेरिका पत्रकार संघको हालै सम्पन्न महाधिवेशनमा यसको सहभागितालाई लिएर केही साथीलाई ज्वरो आयो । [&hell..
पाँच महिना अगाडी (डिसेम्बर २१, २०१५ मा) स्विडेनको मोबाईल कम्पनी टेलियासोनेरा र मलेसियाको एक्सियटाले एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्डस् होल्डिङस् किनबेच गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरे । यसले नेपाली व्यवसायिक जगतमा ठूलो तरंग ल्यायो । यसको एउटा प्रमुख कारण थियोे शेयर कारोबारको रकम । नेपालकै प्रमुख मोबाईल कम्पनीमा लगानी गर्नेे..
बसाई हिँड्नेको तातीले, कसैको मन रुहाउँछ … जेबि टुहुरेको यो गीतले भनेझै हरेक दिन बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लाम देख्दा कस्को पो मन दुख्दैन र ? बिदाईमा आफन्तहरुको मन किन पो रुदैन र ? तर देशनिमार्णमा लागेकाहरुको मन अझै छुन सकेको छैन । यो चालाले देश बन्ने हैन झन् उजाड हुँदै गईरहेको छ । दैनिक १५ […]
आज २५६० औ बुद्ध जयन्ती । नेपालमा जन्मिएका बुद्धका अनुयायी नेपालमा भन्दा अन्य देशमा बढी पाइन्छन् । बुद्धको सिद्धान्त, दर्शन र बिचार बास्तविक अर्थमा बुझ्ने जमास सानो छ । बुद्ध दर्शनलाई धर्मको रुपमा बुझ्ने र अर्थ लगाउनेको जमात नै ठूलो छ । बुद्धले जे नगर्नु भनेका थिए आज त्यहि भएको छ । मानिसलाई जे नगर्नु […]
नेपालमा लामो समयदेखि विभिन्न समस्या छन् । दलहरुले विभिन्न आन्दोलनका बलमा देशमा गणतन्त्र घोषणा गरे । संविधान पनि जारी गरे । तर, त्यो आफैैंमा अपूरो छ । देशमा राजनीतिक दलहरुले बृहद राष्ट्रवादी एकता कायम गर्दै राष्ट्रवादी सरकार गठन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यो हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रमहरुबाट भएको परिवर्तनहरुलाई यथा..